कान्तिपुर गाथा : शहरी नेतृत्वमा बा पुस्ता
Thursday, 10 May 2012 23:01	नागरिक
किशोर नेपाल- तन्नेरीहरुमा कान्तिपुर शहरको खासै चिन्ता देखिदैन। थानकोटको साँघुरो नाका छिचोलेर भर्खर भर्खर शहर छिरेका धेरैजसो अनुहारहरु शरणार्थीको हैसियतबाट माथि उठन सकेका छैनन। रैथानेले त चिन्तागर्न छाडी सकेको शहरको रैथानेले के चिन्तागर्नु? कान्तिपुर आफै कुरुप भै सकेको छ। तै पनि,यसले आगन्तुकहरुको हार्दिक स्वागतगर्न छाडेको छैन। ऋृषि दुर्वाशाले समुद्र निले झैं निलेको निल्यै छ कान्तिपुरले आगन्तुकहरुको वाढी। पहिचानको नाममा कान्तिपुर शहरको सहृदयी स्वभावमात्रै वाँकी छ।
साउदी अरबमा इन्जिनियरको अनुभव- एक कोठाः एक्काइस प्राणी
Thursday, 10 May 2012 22:17	नागरिक
(6 votes, average 2.50 out of 5)
अढाई वर्ष साउदी अरबमा इन्जिनियरिङको काम गरेर फर्केका हुन्, काठमाडौँका सुमन दाहाल। सन् २००५ मा उनी साउदी पुगेका थिए। उनको अनुभव, उनकै मुखबाटः
मनीषाको टाउकोमा सेतो कपाल
Thursday, 10 May 2012 23:04	नागरिक
(13 votes, average 3.08 out of 5)
मनिषा, तिमीलाई देखेपछि अचानक मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो। तिमी फिल्ममा नभएको भए कुन पेसामा हुन्थ्यौ होला अहिले?
थाहा छैन। फिल्मबाहेक अरू पेसाका बारेमा मैले कहिल्यै सोचिनँ। एकैपटक म फिल्ममा लागेकी हुँ।
तिमी राजनीति गर्थ्यौ होला। हजुरबुबाको प्रभाव छ नि तिमीमा?
पोसिबल हुन सक्थ्यो। हजुरबुबा त मेरो आदर्श हो।
खोइ र समय संसर्गका लागि ?
Thursday, 03 May 2012 16:21	नागरिक
(18 votes, average 2.72 out of 5)
रेखा थापालाई आफ्नै पतिसँग संसर्ग गर्ने त फुर्सद छैन भने अरूसँग लुकिछिपी सम्बन्ध राख्ने कुरै भएन। त्यसमा पनि उनी परिन् अलिकति परम्परावादी। उनका लागि शारीरिक संसर्ग दालभात खाएजस्तो पनि होइन। सेक्स साधना हो रेखाका लागि, शरीरको उपासना। मोरङको एउटा सानो गाउँबाट अभिनयको दुनियाँ जित्ने प्रबल आकांक्षा बोकेर शहर पसेकी रेखाका दुःखसुख, उतारचढाव र आँशुहाँसो मिसिएको जीवनकथा रेखाकै शब्दमा उतार्दै छन्, स्वरूप आचार्य :
समलिंगी सेक्स : प्राकृतिक कि अप्राकृतिक
Thursday, 03 May 2012 16:20	नागरिक
महेश चौरसिया- तीन वर्षअघि दिल्लीको हाइकोर्टले भनेको थियो, 'दुई पुरुष वा दुई महिला यदि आपसी सहमतिमा बन्द कोठाभित्र यौन सम्बन्ध राख्छन् भने त्यसलाई अपराध मान्नुहुँदैन।' कोर्टले फैसला गर्दै समलिंगी/तेस्रोलिंगी सेक्ससम्बन्धी कानुन पविर्तन गर्न आदेश दिएको थियो। तर कोर्टको यो फैसलालाई चुनौती दिँदै दिल्ली कमिसन फर प्रोटेक्सन अफ चाइल्ड राइट्सले भन्यो, 'समलैंगिक सम्बन्ध राख्नु प्रकृतिको खिलाफ छ र यसलाई अपराधको संज्ञा दिनुपर्छ।'
Thursday, 03 May 2012 16:17	नागरिक
(9 votes, average 3.33 out of 5)
किशोर नेपाल- विनिता निकै दिनदेखि गायब थिई। दमकमा सम्मान खान गएकी केटी अहिलेसम्म फर्किएकी थिइन कान्तिपुर। 'कहाँ गैहोली केटी यो उखरमाउलो गर्मीमा?' रायना सोच्दै थिई। गाउँ त पक्कै गएकी छैन होली। उसले मे दिवसको छुट्टी विनितासँग बिताउने विचार गरेर बिहानैदेखि विनिताको मोबाइलमा कल गरेकी थिई।
Thursday, 26 April 2012 15:32	नागरिक
पूर्वीय शास्त्रअनुसार मानिसको इतिहास स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट आफ्नै सुन्दर सुपुत्रीमाथिको यौन आक्रमणदेखि सुरु हुन्छ। यौनको मामिलामा यो दुनियाँ साह्रै टेढो छ। अहिलेको समयमा त झन् कुन पल लभ हुने हो, कुन पल बिहे हुने हो र कुन पल विच्छेद हुने हो?
केटीहरू चुम्छन् त म के गरूँ?
संघीय राज्यमा लोकु
कन्टिनेन्टलमा सहमति संविधानमा विमति
सद्दामको भान्छामा २४ घण्टा